Kunuke idolobha bechitha udoti | Isolezwe
Kunuke idolobha bechitha udoti
Izindaba / 11 October 2018, 4:10pm / BHEKI MBANJWA
ABANTU bebeqa noma begega udoti emigwaqweni yeTheku emuva kokuthi abasebenzi be-EPWP bevimbele ukuqoqwa kwawo. Isithombe: DOCTOR NGCOBO DOCTOR NGCOBO
BASAPHAZE udoti emigwaqweni yeTheku abasebenzi be-Expanded Public Works Programme (EPWP) abetelekile ngoba befuna ukuqashwa ngokugcwele.
Kuvela ukuthi abasebenzi ababalelwa ku-800 be-EPWP bavale amasango amadepho eDurban Solid Waste (DSW) bavimbela amaloli ukuthi aphume kuwo.
Lokhu kuholele ekutheni udoti ungaqoqwa enkabeni yeTheku, Newlands, Jacobs, Bluff, Chatsworth naseGlenwood.
UMasipala weTheku uthe udoti uzoqoqwa izolo ntambama kuze kube sebusuku ukuze iTheku lihlanzeke.
Kuthiwa abasebenzi babuyele emsebenzini emuva kokuthi umasipala usabise ngokunqamula izinkontileka zabo.
Njengamanje bawu-1 200 abasebenzi be-EPWP abasebenzisana neDurban Solid Waste kodwa bawu-13 000 abasebenzi be-EPWP abaseminyangweni ehlukene kaMasipala weTheku.
UMnuz Musawakhe Mayisela wezokuXhumana kuMasipala weTheku uxolisile kwizakhamuzi zedolobha wathi udoti usuqalile ukuqoqwa.
“UMasipala weTheku uxoxile nabasebenzi be-EPWP futhi isimo sesibuyele kwesijwalelekile. Umasipala usebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi wonke udoti uyaqoqwa lapho ubungathuthwanga khona,” kusho uMayisela.
Uthe abasebenzi be-EPWP basuke beyitoho abakaze baqashwe ngokuphelele.
Okwesibili abasebenzi beteleka. Bake bateleka ngoJanuwari befuna kona ukuqashwa ngokugcwele.
UMnuz Raymond Rampersdad, oyiNhloko yeDurban Solid Waste, uthe ngoJuni kuqashwe abasebenzi be-EPWP abawu-172 ngokugcwele ababeqale ukusebenza ngo-2014.
“Kuyaxaka ukuthi kungani abantu bekhuluma ngokuqashwa ngokugcwele manje ekubeni kukhona abaqashiwe ngoJuni,” kusho uRampersad.
Omunye umsebenzi uthe babethenjiswe ukuthi bazoqashwa ngokugcwele ngabaphathi bomkhandlu weTheku kodwa lesi sithembiso asizange sifezwe.
“Izinkontileka zethu zincishisiwe, uthola ukuthi abasebenzi kudala bebenikwa inkontileka yeminyaka emibili noma emithathu kodwa manje isivuselelwa inyanga nenyanga,” kusho umsebenzi ongathandanga ukudalulwa.
Uthe bahola uR2 500 bebe bengena ngo-7 ekuseni baphume ngo-4 ntambama kusukela ngoMsombuluko kuze kube wuLwesihlanu.
UMnuz Phumlani Memela, omele abasebenzi be-EPWP, uthe namuhla siyaqhubeka isiteleka sabo yize umasipala ethi sesiphelile.
UMasipala weTheku ubulokhu uba nezigigaba ngohlelo lwe-EPWP kulezi nyanga ezidlule kwase kuvela ukuthi kunesikhulu sakwamasipala esibhalise abasebenzi abayizipoki ohlelweni lwe-EPWP. Izipoki ziholelwa imali ecela kuR1.2 million ngenyanga.